Ukuphupha ngokuwa Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
"Beka uboya ezindlebeni zakhe", «Bona izikhumba ziyadada», "Ulusu lomntu" … Sazi amaqhalo amaninzi malunga negama "ulusu", uninzi lwazo lunxulumene kakubi. Kodwa idyasi nayo inokuba bumbane kwaye ithambe kwaye iyasifudumeza ebusika. Izilwanyana zasekhaya ezithandekayo zihlala zinoboya esifihla kubo ukuba sizithuthuzele, nokuba ziikati ezimhlophe okanye izinja ezimnyama.
I-fox okanye u-sable fur, kunye noboya be-polecat okanye i-mink iba luphawu lobume njengoboya. Kwixesha elidlulileyo ude wabeka ufele lwebhere phambi kweziko, ulusu lwengwe lwalungaqhelekanga. Abantu bakudala bayazifudumeza namhlanje ngeengubo ezenziwe ngofele lwezilwanyana zokwenene, umzekelo, amatywina okanye inyamakazi.
Fumana yonke into oyifunayo malunga "noboya" kuhlalutyo lwamaphupha kwinqaku elilandelayo. Kunokuthetha ntoni ukubona ulusu lwesilwanyana ephupheni?
Ukutolikwa ngokubanzi kolu phawu lwephupha kunokuhamba kumacala amabini: okuhle okanye okungalunganga. Nangona kunjalo, kufanele kukhunjulwe ukuba ekuqaleni ukutolikwa okungalunganga kwesimboli sephupha kuhlala kuhlala kusiqhubela phambili ngokobuqu, kuba kusinceda ukuba siziqonde ngcono.
Ukubona uboya, ngakumbi xa usuka ebuthongweni emanzini, ngumqondiso ngokubanzi imbambano o ingxaki iqwalaselwe. Kwakhona "Ingcuka eyambethe ufele lwegusha" Mhlawumbi ungquzulwano luye luvalela ukuba i-subconscious sele iqondile kwaye umntu ekubhekiswa kuye ngoku uyazi ngophawu lwephupha loboya.
Kuyafana nokususa isikhumba: ukuba uphupha ngokufaka isikhumba, mhlawumbi unemali okanye ubuncinci kwishishini Ilahleko ukwenza. Isimboli kufuneka iqondwe njengesikhombisi ukulungiselela ngcono amaxesha amabi kwixesha elizayo.
Ukuba ulusu lwesilwanyana luyasuswa, umzekelo, ephupheni lezilwanyana zasendle ehlathini okanye edlelweni, oku kungabonakala ngathi kuyanyanyisa kwaye kuzalise iphupha ngentiyo, kodwa ekutolikweni kwephupha kuthathwa njengomqondiso mpu melelo kunye nengeniso yeshishini.
Isikhumba segubu sikwatolikwa ngokufanelekileyo; Njengesixhobo soluntu kunye nokubhiyozela, igubu kwaye ke ngoko ulusu lolulwe phezu kwayo lumele Suerte y mpu melelo.
Ingubo egudileyo, elungiswe kakuhle kwaye ecwebezelayo yesilwanyana esithandwayo soboya ifanekisela isidingo saso Ukusondela, ingakumbi ngokwasemzimbeni nangokhuseleko. Ikhupha ubushushu kunye nentuthuzelo.
Nabani na onxiba ulusu ephupheni uyakhomba Ukwahlulahlula. Akafuni kuthobela imigaqo yentlalo, uzama ukwaphula iindibano. Ngaphandle kokuba uboya buxabisa kakhulu, ubutyebi, kananjalo Ukucingela ifuzisela. Umphuphi kufuneka alumke angazikhobisi kakhulu ngokunyaniseka kwaye ashiye igumbi elaneleyo leemvakalelo kunye neemfuno zabanye abantu.
Kwinqanaba leengqondo, ulusu lushiye ngasemva ekuchazeni amaphupha ngokulangazelela khu seleko. Njengakwiintsinga ezinoboya obushushu, umntu ophuphileyo angathanda ukonyuka kwaye onwabele ukusondela emzimbeni. Mhlawumbi oku kuyasilela ekuvukeni ubomi, okanye woyika ukukuvumela.
Ukuba uboya bumdaka, buzele zizinambuzane, okanye bucace gca, luphawu lokuba ezi mfuno zisondeleyo azifezekiswa okwangoku okanye into ayiziva ilungile.
Imeko yengubo kubalulekile ukutolikwa ngeendlela ezininzi. Njengophawu lwephupha, uboya bukwamela oko. isilwanyana, Igcwele emntwini. Iquka iimvakalelo kunye neemvakalelo ezingekho phantsi kolawulo lwesizathu.
Nabani na ophupha ingubo emdaka nengadibaniyo, ulwalamano lwabo neli cala langaphakathi alunakulinganiswa. Ke ukuzithemba kufanelekile, kubandakanya yonke imiba, kubandakanya nezo ungazithandiyo okanye uzikhanyele ngokwazo, ukuze uphinde ufumane ukulungelelana.
Ukunxiba ulusu kuhlala kungumqondiso wokuchazwa kwengqondo ngephupha. Igobolondo. Uhlobo lokufihla okanye ingxelo yendawo esingqongileyo. Isenokuba malunga nento yokuba umntu ophuphayo ulandela imigaqo kunye nemigaqo. "Yiya ngokuchasene nomsinga". Kuyenzeka ukuba umntu afune ukukhusela umphefumlo wakhe othambileyo nobuthathaka kwabanye ngokuzisongela esikhumbeni esirhabaxa ephupheni kwaye ke ngaloo ndlela akhusele owona mbono usondeleyo.
Ngengqiqo yokomoya, iphupha ngesikhumba libonisa ukuba umntu oleleyo unolwalamano lwe iRazón y ithuku kufuneka uyihlole ngokwakho.
Zibuze: Ngaba unengqondo kakhulu? Olunye ulwazi lunokuba Hayi phumelela ngengcinga.